"Uhlelo lwe-14th lweminyaka emihlanu" luyaqala, uFuzhou usheshisa ukwakhiwa "kwedolobha" - China Foshan Hermes Steel
"Uhlelo lwe-14th lweminyaka emihlanu" luyaqala, uFuzhou usheshisa ukwakhiwa "kwedolobha"
Esontweni eledlule, kusayinwe amaphrojekthi we-21 eLuoyuan Bay Port Area ye "Silk Road Seaport City" eFuzhou, ngokutshalwa kwemali okuphelele kwe-35.4 billion yuan (RMB, efanayo ngezansi). Phakathi kwabo, iphrojekthi yensimbi entsha esezingeni eliphakeme ekhethekile etshalwe futhi yakhiwa yiChina Baowu Taiyuan Iron and Steel (Group) Co, Ltd., ngokutshalwa kwemali okuphelele kwama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10, izokwakha amathani ayizigidi ezingama-3.22 emikhiqizo ye-boutique e ILuoyuan Bay ngesisekelo sesikali esivele sikhona seBaosteel Desheng. Izinto zensimbi engagqwali.
Iziphathimandla zendawo zitshele izintatheli zaseChina News Agency ngomhla ka-8 ukuthi le nkontileka ebumbene izosheshisa ukwenziwa ngcono komkhakha wensimbi waseLuoyuan Bay futhi isheshise ukukhushulwa kwe “Silk Road Seaport City” ukuze kwakheke indawo esezingeni lomhlaba yezimboni ezidayisa insimbi engagqwali.
Ukukhula kancane kancane "kweSilk Road Seaport City" eFuzhou kuyinto encane yokwakhiwa okusheshayo kweFuzhou "kwedolobha". Ngemuva kokungena ku- "GDP edlula isigidi esisodwa se-yuan club" okokuqala ngqa, uFuzhou uqhubekile nokukhuphula umfutho, enza yonke imizamo yokuthinta "isigxobo sokukhula", akhe ihabhu le "Haisi", futhi alwele ukuba idolobha eliphakathi nelizwe.
“Uhlelo Lwe-14 Lweminyaka Emihlanu” lwaqala. UFuzhou ukubeke kwacaca ukuthi eminyakeni emihlanu ezayo, izogxila ekwakhiweni “kwamadolobha” ayisithupha afana neFuzhou Binhai New City, Fuzhou University City, Southeast Auto City, Silk Road Seaport City, Fuzhou (Changle) International Aviation City , kanye neDolobha Logistics City. Kuzwakale "ubizo lomhlangano" ukusheshisa ukwakhiwa kwedolobha lesimanje lamazwe omhlaba.
Ngokwalolu hlelo, “imigomo enzima” yentuthuko kaFuzhou ngesikhathi “soHlelo Lweminyaka Emihlanu Emihlanu” yilezi: ukufezekisa ukwanda okusha ezingeni lamandla enhlokodolobha yesifundazwe, ukulwela ukugcina isilinganiso sokukhula sonyaka esingu-7% ku-GDP, indawo eyakhiwe cishe engamakhilomitha-skwele angama-500, kanye nenani labantu abahlala emadolobheni labantu abayi-500 abayizinkulungwane eziyishumi, ubukhulu benhlokodolobha yesifundazwe kanye namandla okushayela imisebe enyuke kakhulu.
U-Huang Maoxing, umphathi weSikole Sezomnotho eFujian Normal University, ukholelwa ukuthi ukwakhiwa kwamadolobha ayisithupha anamhlanje kuzohlinzeka ngomfutho oqhubekayo ekukhuleni kukaFuzhou okulingene nesivinini esikhulu.
Ekuqaleni konyaka omusha, ukwakhiwa kwamadolobha wesimanje ayisithupha eFuzhou kususwe ngokuphelele. E-Southeast Auto City etholakala eMinhou County, eFuzhou City, iphrojekthi ye-203 Provincial Highway Widening and Reconstruction Project, iLanpu Industrial Park Project, neDongtai High-end New Material Industrial Park project iyashesha. U-Ye Renyou, unobhala we-Minhou County Party Committee, uveze ukuthi ukuqoqa iqembu lamaphrojekthi amakhulu futhi amahle asekela izimoto kuzosebenzisa uchungechunge oluqinile ukwengeza imboni yezimoto, ukukhulisa nokuqinisa imboni yezimoto, nokwenza yonke imizamo yokwakha eningizimu-mpumalanga yezimoto yedolobha ngentuthuko ehlanganisiwe yabantu, imboni nedolobha.
EBinhai New City of Fuzhou, iphrojekthi yeFujian Berry Hekang Digital Life Industrial Park (Isigaba II) iqale muva nje, ngokutshalwa kwemali okuphelele kwe-1.678 billion yuan, egxile kwikhompyutha, ukulandelana kwezakhi zofuzo, ukuhlela izakhi zofuzo, ubuhlakani bokufakelwa nobunye ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu ukwakha isikhungo sedatha kanye ne-Base base yokukhiqiza, isikhungo se-R & D, namanye amapaki ezimboni zezimboni asebenza ngokugcwele, agcwele impilo nokujikeleza. Lesi ngesinye seqoqo lokuqala lamaphrojekthi amakhulu esifundazweni saseFujian ukuqala ukwakhiwa okugxile ekuqaleni kwesikhathi se- “14th Five-Year Plan”.
Ukusheshisa ukwakhiwa "kwedolobha", kanti uFuzhou uzogqamisa ukusekelwa kwezimboni. Engxoxweni, iMeya yaseFuzhou u-You Mengjun iveze ukuthi imboni iyona esekelo ebaluleke kakhulu ukukhuthaza intuthuko esezingeni eliphakeme ngayo yonke indlela, futhi ukuqamba okusha kungamandla okushayela okuqala.
Uma sibheka emuva kuhlelo “Lweshumi Nantathu Lweminyaka Emihlanu”, ngenxa yokukhula okuqhubekayo kwamaqoqo ezimboni amakhulu kunawo wonke ayizigidi eziyizinkulungwane eziyikhulu anjengezindwangu, i-fiber yamakhemikhali nokudla okuvela embonini elula, inani eliphelele lokukhishwa kwezimboni laseFuzhou kulindeleke ukuthi lidlule u-1.1 trillion yuan . Ngase "Uhlelo Lweminyaka Eyisihlanu Lwe-14", uFuzhou uzoqhubeka nokubambelela kwi "niubi" yale mboni futhi angakhululeki, asize ukuheha abaholi abakhulu, alime amaqoqo amakhulu, futhi athuthukise izimboni ezinkulu.
Izinzuzo zamaShayina aphesheya kwezilwandle kanye neTaiwanes futhi zilusizo olukhulu kuFuzhou ukusheshisa ukwakhiwa "kwedolobha". IFuzhou yidolobha elaziwa kakhulu lamaShayina aphesheya kwezilwandle futhi yikhaya lokhokho elibalulekile labantu bakubo baseTaiwan. Kunabantu abangaphezu kwezigidi ezi-4 baphesheya kwezilwandle emazweni nasezifundeni eziyi-177 emhlabeni. U-Huang Maoxing ukholelwa ukuthi ukuqoqa kabanzi ukuhlakanipha namandla abantu bakithi ekhaya nakwamanye amazwe ukuze balwele ukuthola imali eningi, amathalente nobuchwepheshe ekhaya nakwamanye amazwe ukuhlangana eFuzhou kuzosheshisa ukwakhiwa kwamadolobha ayisithupha anamuhla afaka iFuzhou Binhai New City, Southeast Auto City , neSilk Road Seaport City. Thuthukisa "umjikelezo ombaxambili" bese ukhonza iphethini entsha yentuthuko. (Qeda)
Isikhathi sokuthumela: Mar-19-2021